Kedu ihe bụ e-commerce dị ka profaịlụ azụmahịa? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ e-commerce dị ka profaịlụ azụmahịa?
José Ignacio | | Email Marketing, Marketing
E-commerce ma ọ bụ azụmahịa eletrọniki abụghị echiche monolithic, mana na ntụle ọ na-enye ọtụtụ nkọwa ịdabere na ya. Na echiche Wikipedia ọ bụ a usoro ịzụta na ire usoro na ọrụ ndị na-eji asntanetị bụ ụzọ isi gbanwere. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-akwalite ọnụ ọgụgụ azụmahịa nke na-achịkọta nnakọta na ịkwụ ụgwọ site na kọmputa. Beingbụ njirimara ya na nke na-enyere aka ịghọta echiche a na ngalaba azụmaahịa.
Ka o sina dị, na dịka n'aka nke ọzọ ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịghọta, azụmahịa ọ bụla nwere klaasị nke ndị ahịa a na-agwa ya, ma dabere na nke a, anyị nwere ike ịme usoro nkewa nke ga-aba oke uru ịghọta ebumnuche nke isiokwu a . Nke ahụ bụ ịsị, gịnị bụ azụmahịa kọmputa dị ka profaịlụ azụmahịa, na ihe na-enye ọrụ dị iche iche dị ka a ga-egosi n'okpuru.
Iji mee ka nkọwa a doo anya, ọ ga-adị mkpa iburu n'uche ọ bụghị naanị ọdịdị nke ọrụ ọrụ a. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, kwa onye ahia nke ngwaahịa gị, ọrụ ma ọ bụ ihe. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, anyị nọ n'ọnọdụ ka mma iji wee banye n'okwu a, nke bụ n'ikpeazụ ihe nọ na nsogbu a.
1 Klaasị profaịlụ azụmaahịa
2 Nkewa ndi ozo nwere ike dikwa oke mkpa
3 Uru nke ịmepụta azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa dijitalụ
4 Ọghọm na ojiji ya
5 Mmụba na eCommerce n'afọ gara aga
6 Mmụba na eCommerce: kwupụta EU na United States
Klaasị profaịlụ azụmaahịa
N'ezie, ụfọdụ n'ime ha ga-amata gị nke ọma, ma ndị ọzọ nwere ike ị maghị ruo ugbu a. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ oge ịhapụ inwe obi abụọ n'akụkụ a na-emetụta nke a na-akpọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
B2B (Azụmahịa-na-Business): ụlọ ọrụ ndị njedebe ha bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ òtù ndị ọzọ. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ ụlọ ahịa ihe eji ewu ụlọ nke na-elekwasị anya ndị na-emepụta ime ma ọ bụ ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ.
B2C (Ahịa-Ahịa): ụlọ ọrụ ndị na-ere ozugbo na ndị ahịa ikpeazụ nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na e nwere ọtụtụ puku ihe atụ nke ụlọ ahịa ejiji, akpụkpọ ụkwụ, ngwá electronic, wdg.
C2B (Ndị Ahịa-Azụmaahịa): ọnụ ụzọ nke ndị ahịa na-ebipụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-agwa ha. Ha bu uzo eji aru oru ha dika Freelancer, Twago, Nubelo ma obu Adtriboo.
C2C (Ndị Ahịa-Ahịa): ụlọ ọrụ nke na-eme ka ire ụfọdụ ngwaahịa site n'aka ụfọdụ ndị ahịa nye ndị ọzọ. Ihe atụ kachasị doo anya ga-abụ eBay, Wallapop ma ọ bụ ụzọ ahịa ọ bụla nke abụọ.
Nkewa ndi ozo nwere ike dikwa oke mkpa
Kedu ụzọ ọ bụla, enwere echiche ndị ọzọ metụtara ihe azụmahịa kọmputa bụ nke ị kwesịrị ịma site ugbu a gaa n'ihu. Agbanyeghị na amachaghị ha na mpaghara ahụ yana na ha bụ ndị anyị ga-ekpughere gị n’okpuru:
EBG (Ndị Ahịa-na-Goverment).
B2E (Azụmahịa na-Ọrụ).
Ihe na egosiputa na ahia elektrọnik gara n'ihu site n'echiche ọdịnala nke okwu ahụ. Na nke ahụ nwere ike imetụta oge ị raara onwe gị nye ọrụ azụmahịa a pụrụ iche. Maka na aghaghi iburu n'uche na ego a na enweta ahia e-commerce nwere njikọ chiri anya na uto nke teknụzụ ọhụụ.
Uru nke ịmepụta azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa dijitalụ
Nke mbụ, ị ga-enyocha na ọ bụ site n'ụdị azụmaahịa a ka ị ga-anọ n'ọnọdụ iji nweta ndị ahịa karịa ugbu a. Nke a bụ n'ihi na ị nwere ezigbo nhọrọ ịzụta na ire site n'ebe ọ bụla n'ụwa.
Akụkụ ọzọ nke na-akọwa echiche a nwere njikọ na enweghị awa na ụlọ ahịa gị ebe ọ ga-emeghe ụbọchị niile. Ya mere na n'ụzọ dị otú a, onye ahịa nwere ike ịzụta ya mgbe ọ chọrọ na n'oge achọrọ.
Ọzọ nke onyinye ya kachasị mkpa bụ ndekọ dị ala nke ọrụ azụmahịa a ebe ọ bụ na ị ga-atụle na azụmaahịa nke njirimara ndị a achọghị nkwado anụ ahụ, nke bụ ndị na-emecha belata ọnụ ahịa ma e jiri ya tụnyere azụmaahịa ọdịnala.
Oke uru kachasị mma bụ uru ọzọ agbakwunyere n'ụdị azụmaahịa a n'ihi na ịnwere ike ịnweta uru dị elu karịa nhazi ọdịnala. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, akụkụ niile nke eziokwu ahụ bụ na ị na-ere karịa karịa na usoro ọdịnala na ire ere.
Ọghọm na ojiji ya
Dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ụdị azụmahịa ọ bụla, enwere ọtụtụ echiche ndị na-agaghị adị mma maka ọdịmma gị dịka onye ọchụnta ego na mpaghara ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị anyị gosipụtara n'okpuru:
Ngwaahịa enweghị ike ịhụ ma ọ bụ metụ ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ aka na ọ bụ ihe na-emebi emebi nke nwere ike ịkwụsị arụmọrụ azụmaahịa n'ịntanetị site na mmalite. Naanị site na nkọwa zuru oke nke ngwaahịa ahụ ị nwere ike idozi nsogbu a ị nwere na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị.
N'ezie ọ bụ ihe doro anya mana iji zuru na-ere gị mkpa a njikere mere ngwaọrụ. N'oge a ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nwere ike ịme ya mana n'akụkụ ụfọdụ, ebe ndị na-ege ntị ka okenye ma ọ bụ karịa "nka na ụzụ", nke a nwere ike ịbụ nsogbu. Must ga-ewere ya n'ime akaụntụ site na ugbu a ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọwa usoro a na ọtụtụ di nke ọma.
Mgbe azụmaahịa anụ ahụ meghere ọnụ ụzọ ya na nke izizi, ọ na-ekpughere ndị ahịa ahụ na-agafe. Na azụmaahịa ọnlaịnụ, inweta visibiliti bụ ihe gbagwojuru anya karịa ka a na-echekarị. You nwere ike ịnwe nnukwu ngwaahịa na nnukwu ikpo okwu, mana ọ bụrụ na ịrụghị ọrụ iji nweta ọhụhụ, ọ nweghị onye ga-ahụ ya.
Enwela obi abụọ na site ugbu a gaa n'ihu na asọmpi na mpaghara ịntanetị na-ebowanye ebubo na ọ dị ezigbo mkpa na ị ji ya kpọrọ ihe iji tinye ọgwụgwọ ndị ọzọ na ọrụ azụmahịa.
Ọzọkwa nsogbu teknụzụ nwere ike ime ka ị kpọọ aghụghọ ugbu a. N'okwu a, enweghị ike ichefu na azụmahịa azụmaahịa chọrọ opekempe ọrụaka teknụzụ nke ọ bụghị mmadụ niile nwere. Ọ dị ezigbo mkpa ka ị chịkọta onyinye ndị dabere na mmụta ka ukwuu banyere gburugburu ebe obibi.
Mmụba na eCommerce n'afọ gara aga
Mgbanwe nke azụmahịa kọmputa ma ọ bụ eCommerce na Spain ruru akara ndekọ nke nde euro 2019 na nkeji nke abụọ nke 11.999, nke bụ 28,6% ọzọ na 9.333 nde euro na ọ banyere n'otu oge nke afọ gara aga, dị ka data kachasị ọhụrụ nke National Commission of Markets and Competition (CNMC) nyere. E jiri ya tụnyere nkeji afọ gara aga, ahịa e-commerce mụbara 9,4%, ebe ọ bụ na ntụgharị ya na oge n'etiti Jenụwarị na Machị nke afọ gara aga ruru 10.969 nde euro.
Site na ngalaba, ụlọ ọrụ ndị nwere nnukwu ego bụ ndị ọrụ njem na ndị na-eme njem, yana 16% nke ngụkọta ịgba ụgwọ; ụgbọ njem ụgbọelu, na 8,8%; hotels na ebe obibi yiri ya, na 5,8%, na uwe, na 5,6%. Maka akụkụ ya, ọnụọgụ azụmahịa e debara aha na nkeji nke abụọ nke 2019 ruru 211,3 nde azụmahịa, nke na-anọchite anya ịrị elu nke 32,7% ma e jiri ya tụnyere nde 159,2 n'otu oge nke afọ gara aga.
N'ebe a, njem njem ụgbọ ala na ịgba chaa chaa na ịkụ nzọ na-eduga ogo site na ahịa, yana 7,5% na 5,9% nke ngụkọta, n'otu n'otu. Nke a na - esote ịre ndekọ, akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ na ụlọ agụmakwụkwọ na 5,8% yana mmemme metụtara ibugharị na 5,1%. Banyere nkewa nke ala, ibe weebụ e-commerce na Spain chịkọtara 53,4% ​​nke ego na nkeji nke abụọ nke 2019, nke 21,8% sitere na mba ofesi, ebe 46,6% Nke fọdụrụnụ dabara na nzụta sitere Spain na weebụsaịtị ndị ọzọ. Site na ọnụ ọgụgụ azụmahịa, debanyere aha 42,1% nke ahịa na weebụsaịtị weebụsaịtị Spanish, nke 9,3% sitere na mba ọzọ, ebe 57,9% ọzọ mere na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Mmụba na eCommerce: kwupụta EU na United States
N'otu aka ahụ, data CNMC gụnyere ihe 95,2% nke ịzụrụ si Spain A na-eduzi mba ndị ọzọ na European Union, nke United States na-esote (2,1%), ịbụ ndị njem ụgbọelu (11,6%), ụlọ oriri na ọ accommodụ andụ na ebe obibi na uwe yiri ya (7,4% na nke abụọ) mpaghara ndị a chọrọ. N'ihe banyere ịzụrụ ihe na Spain site na mba ọzọ, 64,0% sitere na EU. Akụkụ nke ọrụ metụtara mpaghara ndị njem (nke ndị otu na-ahụ maka njem, ụgbọ elu, njem ụgbọ ala, mgbazinye ụgbọ ala na họtel) na-aza 66,8% nke ịzụrụ.
N'aka nke ọzọ, ego e-commerce n'ime Spain rịrị elu site na 22,3% kwa afọ na oge n'etiti Eprel na June, ruo nde euro 3.791. Ngalaba njem nlegharị anya dị 27,8% nke ntụgharị n'ime Spain, yana Nchịkwa Ọha, ụtụ isi na Social Security (6,5%).
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Kedu ihe bụ e-commerce dị ka profaịlụ azụmahịa?
5 kwụsịrị omume omume iji melite SEO nke eCommerce gị
Atụmatụ 5 iji melite nchebe na ịzụta eCommerce